17 / 07 / 2021 17 / 07 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 250 Views စာ0မှတ်ချက် စွန့်စားသူ, Avengers, ဘိုင်အို, ရဲတိုက်, Classic, Classic ရဲတိုက်, Classic Lego, Classic ပင်လယ်ဓါးပြ, classic ပင်လယ်ဓားပြများ, Classic အာကာသ, Lego, Lego စွန့်စားသူ, Lego BIONICLE, Lego ရဲတိုက်, Lego မှ marvel, Lego Ninjago, Lego ပင်လယ်ဓားပြများ, Lego Star Wars, Marvel, ရွေ့လျားမှုဖမ်းယူ, Ninja Vlogs များ, ပင်လယ်ဓါးပြ, ပင်လယ်ဓားပြများ, အာကာသ, Star Wars, နည်းပညာကို, toa, ဗီဒီယို, YouTube ကို
နှင့် Lego Group မှ Ninjago vlog စီးရီးများကုန်ဆုံးသွားပြီ၊ အနည်းဆုံးယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤတီထွင်ဆန်းသစ်သောနည်းပညာအသစ်သည်မည်သည့်နေရာတွင်နောက်ထပ်ပေါ်ထွက်လာနိုင်ကြောင်းနှင့်မည်သည့်အသေးစားပုံသဏ္lifeာန်များပြန်လည်ရှင်သန်လာနိုင်မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မစဉ်းစားနိုင်ပါ။
အဆိုပါ Ninja ကို vlogs လာကြပြီ ယခုများအတွက်အနီးကပ်ရန်, Jay နှင့် Nya မှတ်တမ်းမရှိတဲ့လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ကျွန်းပေါ်တွင်သူတို့၏စွန့်စားမှုဆက်လက်အတူ။ ဒီစီးရီးကတစ် ဦး ၏ပွဲ ဦး ထွက်မှတ်သား နည်းပညာအသစ် ၎င်းသည် CGI အစုံနှင့်မော်ဒယ်များနှင့်တွဲဖက်နိုင်သည့်ကာတွန်းအသေးစားဓာတ်ပုံများနှင့်သရုပ်ဆောင်သူ၏လှုပ်ရှားမှုများကိုလိုက်ဖက်သည်။
၏ပြည်နယ် art ပစ္စည်းကိရိယာများကန ဦး ဖြစ်စဉ်များဖြစ်နိုင်သည်ပိုကြီးတဲ့စမ်းသပ်မှုများအတွက်စမ်းသပ်အဆင့်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ, နောက်ပိုင်းတွင်ဤအချက်မှအသုံးမပြုသွားပုံရသည်။ ငါတို့မှာတချို့ရှိတယ် ideas ကျနော်တို့ဒီနည်းပညာကနေနောက်တစ်ခေါက်ကြည့်ချင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါပေမယ့်ဘာမှအတည်မပြုရသေးပါ။
A Star Wars အလင်းအိမ်
Lego Star Wars inarguably သည် ninja vlogs ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အတွက်အထင်ရှားဆုံးသောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ သရုပ်ဆောင်များသည်အပြန်အလှန်အားဖြင့်အချို့သော slabstick နှင့်အတူကျော်ကြားသော lightsaber တိုက်ပွဲများအားပြန်လည်ပုံဖော်ကြည့်ခြင်းဖြင့် Lego ဟာသသို့မဟုတ်ပဲသစ္စာရှိနိုင် Lego သူတို့ကိုအပန်းဖြေ။
လုကာ Skywalker ရဲ့ Duel မှartD N နှင့်အတူ Naboo ထိပ်တိုက်တွေ့ရန်ဇ Vaderarth Maul, ရွေးချယ်စရာတိုက်ပွဲတွေအများကြီးရှိပြီးနောက်တစ်နေ့အထိအချိန်ကုန်လွန်စေနိုင်သည် Star Wars ရုပ်ရှင်.
Avengers vlogs များ
အနည်းငယ်ပိုသက်သောင့်သက်သာရှိသောအရာအတွက်နယူးယောက်ရှိ Avengers မျှော်စင်တွင်ဆင်တူသော vlog စီးရီးများကော City နှင့်ငါတို့အကြိုက်ဆုံးစူပါဟီးရိုးအချို့သရုပ်ဆောင်?
ninja vlogs ၏ပုံသေနည်းသည်ဗီဒီယိုများပျမ်းမျှအားဖြင့်ကြည့်ရှုသူ ၇၀,၀၀၀ (အနည်းဆုံးယူကျု့ဘ်ပေါ်ရှိသူတို့၏ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်တရားဝင်ဖြစ်အောင်တင်ခဲ့သည်) Lego website။ ထိုအကြောင်းပြချက်ကြောင့်ထိုစတိုင်ကိုပိုမိုမှတ်မိလွယ်သောဇာတ်ကောင်များနှင့်ကိုက်ညီခြင်းကလူကြမ်းအမျိုးမျိုးနှင့်သူရဲကောင်းများမှလာရောက်လည်ပတ်သောပရိသတ်များနှင့်အဓိကပရိသတ်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည်။
Classic ဆောင်ပုဒ် Adventures
နည်းပညာသစ်အတွက်နောက်ထပ်စိတ်ကူးတစ်ခုမှာတိုတောင်းသောဟာသစီးရီးများပြန်လည်လည်ပတ်ခြင်းဖြစ်သည် classic Lego အထူးသဖြင့်နှင့်အတူ themes များ Lego Group ၏ 90 နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နီးကပ်လာ။
၏ကြိုက်နှစ်သက်ဆိုပါစို့ Classic ပရိသတ်များသည်လျှို့ဝှက်ကင်မရာများဖြင့်ကြည့်ရှုနေစဉ်ကြည့်ရှုသူများသည် ၀ င်ရောက်စီးနင်းခြင်းနှင့် tomfoolery တို့၏နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများကိုလုပ်ဆောင်သည်။ ဒီအတွေးအခေါ်ကို Castle, Pirates, Adventurers စသဖြင့်အသုံးချနိုင်ပါတယ်။
တစ် ဦး က BIONICLE ဇာတ်ကား
နည်းပညာသာအသုံးပြုခဲ့သည်ပေမယ့် Lego minifigures ယခုအချိန်အထိရွေ့လျားမှုကိုဖမ်းယူသည့်စက်ကိရိယာများသည် BIONICLE ၏အရိုးကိန်းဂဏန်းများကိုစီးရီးအသစ်တစ်ခု၏အခြေခံအဖြစ်အလွယ်တကူမြင်နိုင်သည်။
Toa ၏စွန့်စားမှုများသည်ဇာတ်လမ်းအတွက်လွမ်းဆွတ်မှုများများစားစားမရှိသောပရိသတ်များအားဖမ်းဆီးရန်ဇာတ်လမ်းကိုပြန်ပြောပြသည့်ဗီဒီယိုပေါင်းချုပ်ပေါင်းများစွာဖြင့်ပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ BIONICLE ကိုရွေးချယ်ပါကဤအကြံသည်အထူးသဖြင့်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည် လာမည့် 90th နှစ်ပတ်လည် Lego Ideas အစုံ
← Lego CITY, Friends, VIDIYO နှင့် DOTS ယူကေကိုသွားမယ်
LEGO သည်၎င်း၏ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်နည်းဗျူဟာကိုမည်သို့ထိန်းသိမ်းထားသနည်း။ →